म भारतीय दलाल हैन, कतै चीनको इशारामा त आरोप लगाइएको हैन ? : सांसद सरिता गिरी – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनि’स्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमै हेट स्पिच दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी छन् ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा विशेष सम’य लिएर बोल्दै सांसद गिरीले त्यो अभिव्यक्ति आफूमाथि नभई संसदीय मर्यादामाथि कै आक्रमण भएको बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार यो हेट स्पिच कानुनी करबाहीका लागि पर्या’प्त हुन्छ । र, म गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु कि यसलाई रेकर्डमा लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
सांसद गंगा चौधरीको नाम नलिई उनले १९ जेठको त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटा’उन समेत माग गरिन् । संसदमा जासुसको आरोप लगाउँछ, दादागिरीको कुरा गरिन्छ भने यो कुनै व्यक्तिमाथि मात्र होइन, संसदमाथि कै आ,क्र,मण हो, उनले भनिन् ।
चौधरीले भारतीय चेलीले नेपालको संसदमा आएर दादागिरी गरेको र पदको मर्यादा नभएको भए भौतिक रुपमा अक्रमण गर्न सक्ने बताएको उनले बताइन् ।
सांसद गिरीले भने आफूले नेपाल भारतबीच संवाद अगाडि बढाइयोस् भन्दा केही सञ्चार मध्यामहरुले भारतलाई नसोधि नक्सा बनाएको भनेर प्रचार गरेको र नेकपा सांसदले त्यही समाचार पढेर धारणा व्यक्त गरेको बताइन् ।
सांसद गिरीले आफूलाई भारतीय दलाल भनेकोमा आपत्ति मात्र जनाइनन्, सांसद चौधरीमाथि पनि प्रश्न उठाइन् ।
चौधरीका पति दाङको राप्ती गाउँपालिकामा चुनाव लड्दा भारु बाँडेको र गाउँलेले समात्दा यो भारु त चीनको तर्फबाट बाँडेको भनेको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘कुनै ठूलो शक्तिको आड विना कसरी आरोप लगाइयो ? कतै उत्तरी छिमेकी चीनको इशारामा त एक भारतीय चेलीमाथि आरोप लगाइएको होइन ?
भारतीय चेली (आफू)लाई कसैले चाँदीको चम्चामा राखेर सभासद पद नदिएको उनले बताइन् । ‘नेपालको कानुनअनुसार आएको हुँ’ भन्दै उनले इतिहासको जानकारी छैन भने आफूसँग लिन र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षत गर्न नेकपा नेताहरुलाई आग्रह गरिन् ।
Previous सरकारको नियम मान्दै क्वारेन्टाइनमा मनिषा कोइराला…हेर्नुहोस l
Next राष्ट्रपतिका पाउ दुखे भनेर जनताले आफू भेकै बसेर भए पनि शीतल निवासदेखि एयरपोर्ट पुग्नका लागि हेलिकोप्टर चढाएकै छन्’ : सांसद शाही
2 mins ago Mechi Mahakali